City in Bosnia and Herzegovina, Bosnia and HerzegovinaTemplate:SHORTDESC:City in Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina
Sarajevo waa casimada bosniya iyo magaalada ugu weyn ee Bosnia iyo Herzegovina , oo leh 275,524 dadweyne oo xadka u dhigan xaddidan. Deegaanka Sarajevo magaalo weyn , oo ay kujirto Sarajevo Canton ,Bariga Sarajevo iyo degmooyinka ku dhow, waxay hoy u yihiin 555,210 degane. Waxaa lagu hayaa dooxada weyn ee Sarajevo ee Bosnia , waxaa ku wareegsan Dinaric Alps oo ku yaal hareeraha Wabiga Miljacka oo ku yaal bartamaha Balkans Sarajevo waa caasimada iyo xarunta dhaqanka ee Bosnia iyo Herzegovina .Waxay ku taal dooxada cidhiidhiga ah ee Webiga Miljacka ee hoosta Mount Trebević. Magaalada ayaa leh dabeecad adag oo muslimiin ah, oo leh masaajiddo fara badan, guryo alwaax leh oo leh alwaaxyo qurxoon, iyo suuqdii qadiimiga ahayd ee Turkiga (Baščaršija); inbadan oo kamid ah dadku waa muslim. Masaajidada ugu waaweyn magaalada waa Masjidka Gazi Husreff-Bey , ama Begova Džamija (1530), iyo Masjidka Cali Pasha (1560-66). Husreff-Bey wuxuu kaloo dhisay medrese (madrasah), oo ah iskuul muslimiin ah oo cilmiga fiqiga; the Imaret, oo ah jikada bilaashka ah ee loogu talagalay saboolka; iyo hamam , musqulaha dadweynaha. Dhamaadkii saacaddii qarnigii 16aad ayaa ku xigailaa Begova Džamija. Madxafyada waxaa ka mid ah "Mlada Bosna" ("Da'da yar ee Bosnia"), oo ah liistada matxafka magaalada; Matxafka Kacaanka, oo soo afjaraya taariikhda Bosnia iyo Herzegovina ilaa 1878; iyo madxafka Yuhuudda. Sarajevo waxay leedahay jaamacad (1949) oo ay ku jiraan kulliyadaha macdanta iyo teknolojiyada, akadeemiyada cilmiga sayniska, kulliyada farshaxanka, iyo isbitaallo dhowr ah. Wadooyin dhowr ah oo loogu magacdaray ganacsatada ayaa ka badbaaday asal ahaan 37, iyo Kazandžviluk (baaraha wax daabaca) ayaa lagu keydiyay qaabkeedii asalka ahaa.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Sarajevo&oldid=217989"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 2 Oktoobar 2021, marka ee eheed 08:34.